Kaleidoscope: Iyo Yakasiyana App yeApple yeFolders, Kodhi, uye Mifananidzo | Martech Zone
Mumwe wevatengi vedu aida dhizaini nyowani yepeji ravo repamba izvo zvaida zvakati wandei zvekusimudzira mukati memapeji eiyo theme. Pataive takakura nezvekutaura kodhi, isu tanga tisina kuisa pamwechete gwaro rakazara pane ese mafaera uye akavandudzwa mafaera atakange tagadzira uye isu tanga tisingatarise shanduko imwe neimwe kuita dura (vamwe vatengi havadi izvozvo). Mushure mechokwadi, hazvinakidze kudzokera uye kunoongorora maforodha nemafaira, saka ndakatsvaga mhinduro ndikachiwana - Kaleidoscope.
NaKaleidoscope, ini ndakakwanisa kunongedzera kune yega yega maforodha uye nekukasira kuziva mafaira api akawedzerwa, kubviswa, kana kusiyana kubva kune rimwe.
Ini ndobva ndakwanisa kuvhura yega yega mafaera akagadziridzwa uye ndikaona padivi-ne-padivi kuenzanisa kweiyo kodhi shanduko yakapedzwa. Heino muenzaniso neakajeka mavara mafaera:
Dai izvo zvaive zvisina kutonhorera zvakakwana, Kaleidoscope inogona zvakare kuzadzisa ichi fanika nemifananidzo!
Mushure mekurodha pasi, ini ndanga ndasimuka uye ndichimhanya mune imwe nyaya yemasekondi - iyo mushandisi interface yaive inonzwisisika uye nyore kuona.
Dhawunirodha Yegumi Nemazuva-Muedzo weKaleidoscope
Tags: apurokodhi kuenzanisakuenzanisa appzvakasiyanazvakasiyana appfaira kuenzanisakuenzanisa kwefairadhairekitori rakasiyanamufananidzo kuenzanisamufananidzo wakasiyanaiosOSX